Mkpọchi App, iji chịkwaa nzuzo nke gam akporo gị Gam akporosis
Wantchọrọ ịchịkwa gam akporo gị zuru oke mgbe ọ bịara na nzuzo? Ọ bụrụ na azịza ya bụ EE, ị gaghị enwe ike ịhapụ ịhapụ nkwanye taa n'ihi na ọ bụ maka m onye nke kasị mma ngwa ịchịkwa nzuzo nke anyị gam akporo ọnụ.
Ngwa ochie mara ọtụtụ ndị na-abịa ugbu a na atụmatụ ọhụrụ agbakwunyere, Na-akwado gị gam akporo mkpisiaka nche, na-enweghị mkpa inye ikikere nchịkwa, ya bụ, adịghị mkpa pin na njikwa ngwaọrụ ka ị ghara ida ọrụ mkpịsị aka nke ngwaọrụ gam akporo anyị.
Ngwa a na-aza maka aha Mkpọchi AppLock, anyị nwere ike inweta ya n'efu na Playlọ Ahịa Google na nhọrọ nke mgbasa ozi agbakwunyere na ịzụrụ ihe na ngwa, ọ bụ ezie na agwalarị m gị na opekata mpe Achọghị m ịzụrụ ihe ọ bụla ịzụrụ iji nweta ọtụtụ ngwa.
0.1 Budata mkpọchi AppLock n'efu na Playlọ Ahịa Google site na ịpị njikọ a
1 AppLock Image osisi
Budata mkpọchi AppLock n'efu na Playlọ Ahịa Google site na ịpị njikọ a
Ọrụ AppLock na-enye anyị abụghị nke ọzọ karịa nke nwee ike itinye mkpọchi na ngwa arụnyere na gam akporo anyị iji chebe ha pụọ ​​na nnweta ikike Agbanyeghị na agbachi ma ọ bụ na - arụ ọrụ gam akporo anyị.
Nke a na ụdị mkpọchi na mgbakwunye na inwe ike ịbụ site na ahụkarị Kpọghe ụkpụrụ ma ọ bụ paswọọdụ, ugbu a ọ na-anabata ndabara nhazi nke anyị mkpisiaka aha na ntọala nke anyị gam akporo ọnụ. Nke a bụ nnukwu ọganihu na nnukwu ọrụ agbakwunyere ebe ọ na-enye anyị nkasi obi dị ukwuu na-enweghị ida iota nke nchekwa.
Ewezuga inwe ike igbochi ma hụ ohere ịnweta ngwa ọ bụla ebudatara ma wụnye na gam akporo anyị, ọbụna usoro ngwa ma ọ bụ ọrụ dị ka ebighị deactivation nke njikọ data, Bluetooth na WiFi, O nwekwara nhọrọ iji gbochie ngwa ọ bụla ọ bụla arụnyere na ngwaọrụ gam akporo anyị, ma ọ na-ebudata ya na Storelọ Ahịa Play ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị wụnye ya na mpụga site na nbudata ngwa ngwa.
Dị ka a ga - asị na nke a ezughi oke, o nwekwara ngwaọrụ nchekwa dịka vault iji dowe foto anyị na vidiyo anyị naanị na enwere ike ịnweta site na nhọrọ nke vault n'onwe ya. Ọzọ nhọrọ ka a mata bụ na-ewere foto nke ndị bịara abịa bụ ndị gbalịrị ịnweta anyị gam akporo n'amaghị usoro mkpọghe ma ọ bụ mepee paswọọdụ.
Mgbe ahụ, ọ nwere nhọrọ dị mma dịka ike mepụta profaịlụ anyị, na-eme ka ngwa ndị anyị chọrọ ka anyị gbochie mgbe anyị na-arụ ọrụ profaịlụ ahụ ejiri otu pịa, ọ nwekwara nhọrọ bara uru nke anyị nwere ike nye profaịlụ dị ka ọnọdụ anyị dabere na netwọk Wi-Fi nke anyị jikọtara.
Dịka ọmụmaatụ, mgbe anyị jikọtara na netwọk ọha na eze nke a maara dị ka nke ụlọ oriri na ọ favoriteụ favoriteụ kachasị amasị anyị, anyị nwere ike ịme nhọrọ ahụ ka ọ bụrụ na anyị jikọọ na WiFi ahụ kpọmkwem, oke nchekwa igbochi niile ngwa na anyị ahazi site na ngwa ntọala.
Mana maka ndị niile nhọrọ ndị a ma ọ bụ arụmọrụ ha amatachaghị, anyị nwekwara Incognito nchọgharị wuru n'ime ngwa ahụ, mpaghara ebe anyị nwere ike jikọọ na netwọkụ mmekọrịta anyị dịka Twitter, Facebook, Google+ na Linkedin n'enweghị ebe etinyere ngwa ndị izizi.
Maka ihe niile a na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị ka ohere nke budata ma tinye isiokwu ma ọ bụ skins n'efu inye ngwa ahụ mmetụ dị iche na mgbe m nyochachara ya nke ọma ụbọchị ole na ole, abịala m na nkwubi okwu na AppLock bụ otu n'ime ngwa kachasị mma iji jikwaa ma kpuchido nzuzo nke njedebe gam akporo anyị na-enweghị enye ọrụ na mkpisiaka mkpọchi nke anyị gam akporo na-enye anyị.
Download App mkpọchi ebe a
AppLock Image osisi
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mkpọchi App, otu ngwa kachasị mma iji chịkwaa nzuzo nke gam akporo gị
Samsung na-egosi Galaxy A6 na Galaxy A6 +, nkọwa na atụmatụ
Galaxy S9 ahịa na South Korea tụkwasịrị obi